नेकपा सञ्चालनको निश्चित विधिहरू छन् । दुई ठूला पार्टीहरू आपसमा एकता गरेर बनेको हो, यो पार्टी । २०७५ जेठ ३ लाई नै पहिलो दिन मानेर जाने हो भनेर त्यतिखेर एउटा सपना बोकेर दुई पार्टी साबिकमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकताबद्ध भएका हुन् । त्यतिखेरको पृष्ठभागमा हामी दुई पार्टी र केही लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आउन चाहने साथीहरू मिलेका समूहले चुनाव लडेका थियौँ । पार्टी एक भएको थिएन तर चुनावमा गाउँगाउँमा हेर्दा कार्यकर्ताहरू एक भएर दौडिरहेका थिए । कानुनी हिसाबले हेर्दा पार्टी दुईटा, अझ प्रतिस्पर्धीजस्तो तर अब गठबन्धन बन्यो, जनताको तहमा उच्च स्वागत र कार्यकर्ता तहमा एउटै पार्टीजस्तो वातावरण बनेको थियो । त्यो पृष्ठभूमिमा पार्टी एकीकरण गर्दा नेताहरू खासगरी दुई अध्यक्षहरूले जिम्मा लिनुभएको थियो । उहाँहरूले एक ढङ्गको सहमति गरेपछि जेठ ३ गते बालुवाटारमा डाकिएको दुवै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँहरूले सुनाउनुभएको निष्कर्षका आधारमा भएको हो, यो एकीकरण । त्यतिखेर दुईटा पार्टीको लोकप्रिय मतलाई पनि आधार नबनाउने, स्थानीय चुनावमा प्राप्त सिटलाई पनि हिसाब नगर्ने र संसद्मा दुवै पार्टीले प्राप्त गरेको शक्तिलाई पनि हिसाब नगर्ने सहमति बनाइयो । सहमतिमा मन मिलाएर पार्टी एकीकरण गर्ने र त्यहीअनुसार संरचना बनाएर अघि बढ्ने हिसाबले हामीले वैधानिक व्यवस्था, विधि बनायौँ । जेसुकै गर्दा पनि बहुमत, अल्पमतजस्तो परम्परागत कम्युनिस्ट आन्दोलनको टाउको गन्तीको काम नगर्ने । किनभने यो परम्परागत कम्युनिस्ट आन्दोलनको जस्तो एकता, लेनिनवादी साङ्गठानिक विधिजस्तो पनि थिएन । हामीले भन्यौँ– यो दुईटा फरक–फरक धारको समीकरण हो, शक्तिको होइन । शक्तिको एकीकरण हुन्थ्यो भने लोकप्रिय मतका आधारमा गइन्थ्यो होला । ११ लाख मत पाएको माओवादी केन्द्र र ३३ लाख मत पाएको एमालेको त्यो स्थितिमा ७५ र २५ प्रतिशत ‘स्ट्रेन्थ’का आधारमा कमिटी बन्थे, पद बाँडिन्थे । तर, हामीले त्यसो गरेनौँ । एकीकरण भनी सहमतिमा निर्णय गर्दै जाने भन्यौँ । एकताको मूल ‘स्प्रिट’ सहमति हो र एकता महाधिवेशन जहिलेसम्म सम्पन्न हुँदैन, तहिलेसम्म सहमतिका आधारमा चल्ने भन्यौँ । त्यतिखेर केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा कसको टाउको कति भन्ने आतङ्क थिएन, त्यस्तो हिसाब–किताब नै गरेनौँ । किनभने ‘फर्मुला’ नै सहमति बनायौँ । दुई अध्यक्षको सहमतिमा प्रस्तावपत्र तयार हुन्छ । त्यसलाई कार्यसूची बनाएर महासचिवले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । सहमति नभएका विषयलाई छलफल गर्दै जाने ।
भारतको एउटा जासुसी संस्थाको प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई प्रधानमन्त्रीले भेट दिएको सन्दर्भ होला यो । भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको दिन हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर शुभकामना दिनुभयो । त्यसमा हाम्रो विशेषगरी सीमासम्बन्धी समस्याहरू हल गर्नुपर्नेछन् भन्दा उहाँ (मोदी)ले मेरो दूत पठाउँछु भन्नुभयो । दूत पठाउँछु भन्दा फलानोलाई पठाउनुस् भन्न सकिन्छ ? कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने पनि उहाँले मित्र देशको समकक्षीलाई फलानालाई दूत बनाई पठाऊ भन्न सक्दैन नि । प्रधानमन्त्रीले दूत पठाउनुस् न त भन्नुभयो । कूटनीतिक च्यानलबाट हवाईजहाज ल्याउनेदेखि कूटनीतिक नोट आदान–प्रदान भयो । दूत आएर भेट भयो, नोट टिपोट भएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ज भयो । अनि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रसार भयो । उताबाट आएको व्यक्तिले आफ्नो समकक्षीलाई भेटेर जानुभयो । समकक्षता भयो । शिष्टाचार भयो । समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको दूतको हैसियतमा आउनुभयो । यसरी वार्ताको वातावरण थालनी गर्नुभएकोमा त प्रमको प्रशंसा गर्नुपर्ने होइन र ? कूटनीतिमा त ‘ट्याक वान टु’ ... विभिन्न रूप हुन्छन् होइन र ? अहिले प्रश्न उठाउने नेताहरूलाई यति कुरा थाहा नभएको त होइन होला नि ?